စိန့်လူစီယာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကစိန့်လူစီယာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) အများအပြားကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။ ဒီတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိ IBC မှအဆိုပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အများအပြားနိုင်ငံခြားသားများကိုဆွဲဆောင်။
1999 ၏နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ (လျှော့မှာ "အက်ဥပဒေ") ကွဲပြားခြားနားသောဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများတစ်ဦးပိုမိုစုံလင်လာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစုစုတို့အတွက်ဆက်စပ်နေသောနေရာများတွင်သုံးနိုငျတဲ့ခေတ်သစ်ဥပဒေရေးရာမူဘောင်ပေးပါသည်။ အဆိုပါအက်ဥပဒေ 2000 နှင့် 2001 အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဒါဟာနိုင်ငံတကာအမည်ပျက်စာရင်းအပေါ်ထားရှိသို့မဟုတ်ပင်မဆိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တို့ကမသင်္ကာဖူးသောကွောငျ့စိန့်လူစီယာရေပန်းစားသည်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ကမ်းလွန်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုကာကွယ်ရန်ခိုင်မာတဲ့ Anti-လိမ်လည်မှုနဲ့ anti-ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာဥပဒေများထိန်းသိမ်းထားသည်။
စိန့်လူစီယာ (စိန့်လူစီယာ) သည်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်အရှေ့ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်တို့အကြားတည်ရှိပြီးကျွန်းတစ်ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာမာတီနစ်နှင့်ဘာဘေးဒိုးစ၏အကျွန်းများအနီးတွင်တည်ရှိသည်။
150 နှစ်အတွင်းများအတွက်ပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ကျွန်းကိုကျော်စစ်တိုက်ကြ၏။ ပြင်သစ်ပထမဦးဆုံး 1660 အတွက်စိန့်လူစီယာအခြေချခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှ 1663 အတွက်ကျွန်းကို ယူ. နှစ်နိုင်ငံစလုံးကျွန်းကိုကျော်စစ် 14 ကြိမ်ထံသို့သွားလေ၏။ ဗြိတိသျှနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်း၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူတဲ့အခါမှာဒါဟာ 1814 သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ပေ။ 1979 မှာတော့စိန့်လူစီယာယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။
၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကတစ်ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်နှစ်ခုအိမ်သူအိမ်သားလွှတ်တော်နှင့်တစ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်အောက်မှာနေတဲ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအဖြစ်ဖော်ပြနေသည်။ အင်္ဂလန်ရဲ့ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II ကိုယင်း၏အရာရှိတဦးကဧကရာဇ်သည်။
1867 ၎င်း၏မြို့ပြ Code ကိုပြင်သစ်ဥပဒေများအပေါ်အခြေခံပြီးနေစဉ်၎င်း၏ဥပဒေရေးရာစနစ်, ဗြိတိန်အဖြစ်များသည့်ဥပဒေအပျေါမှာစိတျအပိုငျးအခြေစိုက်ရောနှောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပါဝင်ပါသည်။
ယင်း၏အရာရှိတဦးကသင်သည်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, အများအပြားနိုင်ငံသားများအဖြစ်ကောင်းစွာပြင်သစ်စကားမပြောတတ်။
တစ်ဦးကစိန့်လူစီယာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) အကျိုးကျေးဇူးများကိုဤအမျိုးအစားများကိုရရှိသွား:
• ဘေးကင်းလုံခြုံစီရင်ပိုင်ခွင့်: စိန့်လူစီယာနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းမဟုတ်သလိုနိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကအဖှဲ့အစညျးနှငျ့သံသယအောက်တွင်ဖူး။
• နိုင်ငံခြားသားများမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်: နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ IBC ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်၎င်း၏ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• အခွန်လွတ်: IBC ရဲ့ကော်ပိုရိတ်, ဝင်ငွေ, ဒါမှမဟုတ်အရင်းအနှီးအကျိုးအမြတ်အခွန်ပေးဆောင်ကြပါဘူး။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်မှဘာသာရပ်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းလူတိုင်းမိမိတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေထုတ်ဖော်ရပေမည်။
• ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စီးပွားရေး: IBC ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ / တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တညွှန်ကြားရေးမှူးအတူတူပင်လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်နိုင်သည့်လိုအပ်သည်။
• အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်: နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်သို့မဟုတ်တက် paid ရှယ်ယာမြို့တော်အဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများအမည်များကိုအဘယ်သူအားမျှအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။
• အဘယ်သူမျှမ File: IBC ရဲ့အခွန်အခမဲ့ဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များ file မှမလိုအပ်ပါ။ အဘယ်သူမျှမစာရင်းစစ်လိုအပ်သည်။
• အင်္ဂလိပ်: 165 နှစ်ပေါင်းစိန့်လူစီယာကဗြိတိသျှအုပ်စိုးမှုအောက်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်က၎င်း၏တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။
စိန့်လူစီယာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) အမည်
တစ်ခုက IBC အတိအကျရောနှောသို့မဟုတ်စိန့်လူစီယာအတွက်အခြားဥပဒေရေးရာ entity ရဲ့နာမတော်လည်းအလားတူကုမ္ပဏီအမည်အားမရွေးချယ်နိုင်ပါ။ ရရှိနိုင်မှုများအတွက်အခမဲ့ name ကိုရှာဖှေနေတဲ့အခကြေးငွေအတွက်နာမည်တစ်ခုကြိုတင်မှာကြားထားနှင့်အတူကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Registry ကိုအတူကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုက IBC က၎င်း၏ကုမ္ပဏီနာမ၌ "လီမိတက်", "ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း" သို့မဟုတ် Sociedad Anonima ", ဤစကား" ကော်ပိုရေးရှင်း "၏တဦးတည်းအသုံးပြုရမည်။ သို့မဟုတ်မိမိတို့၏အတိုကောက် "ကော်ပိုရေးရှင်း", ", Ltd. ", "Inc က" သို့မဟုတ် "လုပ် SA" ၏တဦးတည်း။
တစ်ခုက IBC စိန့်လူစီယာမှ လွဲ. ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာစီးပွားရေးအရနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနီးပါးမည်သည့်အမျိုးအစားလုပ်ဆောင်သွားရန်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်လိုင်စင်လိုအပ်သည့်ဘဏ်, အာမခံ, ယုံကြည်မှု, ဒါမှမဟုတ် Re-အာမခံကဏ္ဍအဘို့ဖြစ်ကြ၏။
ထို့အပြင်တစ်ဦး IBC ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းအဖြစ် မှလွဲ. စိန့်လူစီယာအတွင်းအိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Registry ကိုတစ်ဦး IBC မှဆွဲသွင်းပါဝင်ကိုင်တွယ်။ များသောစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်နေ။ ကိုယ့်လျှောက်လွှာများနှင့်အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများတင်သွင်းနေကြသည်။
တစ်ဦး IBC မှစစ်ဆင်ရေးအသင်းက၎င်း၏ဆောင်းပါးများတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြနေကြသည်။ ဤရှယ်ယာရှင်များရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့အတူသူ့ရဲ့ဒါရိုက်တာများနှင့်အရာရှိများ၏အာဏာနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ defining စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပါဝင်သည်။ သူတို့ကအစတစ်ခု IBC အဆုံးသတ်သို့မဟုတ်ပျော်ဘယ်လိုပါဝင်သည်။
by-ဥပဒေများမကြာခဏနေ့ကစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ် function ကိုမည်သို့သောနေ့ရက်ကာလကိုဖော်ပြအစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများဖြည့်စွက်။
တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး IBC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်မည်သည့်တိုင်းပြည်တစ်နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်အလောင်းတွေရှယ်ယာရှင်များဖြစ်နိုင်သည်။ ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်များခွင့်ပြုထားပါသည်။
ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ ရှေးနုရှယ်ယာမဲပေးရှယ်ယာတန်းတူတန်ဖိုးသို့မဟုတ်မရှိဘဲအစုရှယ်ယာနှင့်ဒဿမကိန်းရှယ်ယာ: an IBC အောက်ပါအစုရှယ်ယာများကိုထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
တစ်ဦးတည်းသာဒါရိုက်တာတစ်ဦး IBC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာမဆိုတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်နဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာကသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်အလောင်းတွေဖြစ်နိုင်သည်။ ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာများခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။
အရာရှိများတစ်ဦးလိုအပ်ချက်မရှိကြပေ။ တဦးတည်းအဖြစ်ခန့်အပ်လျှင်သဘာဝလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်ခန္ဓာကိုယ်အရာရှိတစ်ဦးအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ အရာရှိများဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်လိုအပ်ချက်ရှိစဉ်အခါ, များစွာသော IBC ရဲ့ $ 50,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာခွင့်ပြုရန်ရွေးချယ်ပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရှယ်ယာမြို့တော်အထိပေးဆောင်နိမ့်ဆုံးအဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်ရှိသေး၏။
တစ်ခုက IBC ဝင်ငွေအခွန်ကနေလုံးဝကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ် 1% ဝင်ငွေအခွန်နှုန်းကိုပေးဆောင်ဖို့ရွေးချယ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ 1% ဝင်ငွေအခွန်နှုန်းရွေးကောက်ပွဲများအတွက်အကြောင်းပြချက်တဦးတည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှမဆိုမှုနှုန်းမှာဝင်ငွေခွန်၏ငွေပေးချေမှုအခြားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းကနေဥပဒေရေးရာ entity ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိရာ CARICOM နှစ်ချက်အခွန်သဘောတူညီချက်သုံးစွဲဖို့လိုသူတို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏။
IBC ရဲ့မြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ အဘယ်သူမျှမတံဆိပ်ခေါင်းတာဝန်များကိုရှိပါတယ်။
စာရင်းစစ်သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်လည် FILE မရှိ IBC အဆိုပါ 1% ဝင်ငွေအခွန်နှုန်းကိုများအတွက် opts မဟုတ်လျှင်လိုအပ်သည်။
IBC ရဲ့ကော်ပိုရိတ်များနှင့်ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရွေးချယ်ရာတွင်အစိုးရကအတူဘဏ္ဍာရေးကြေညာချက် file မှမရှိကြပါဘူး။
တစ်ဦး IBC ထည့်သွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း2မှ3အထိကြာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကစိန့်လူစီယာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်: စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားသားထိန်းချုပ်မှု, privacy ကို, အခွန်အခမဲ့, အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်ပိုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တဦးတည်းရှယ်ယာရှင် / ဒါရိုက်တာမရှိစာရင်းစစ်မရှိဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းဖိုင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်တရားဝင် သင်သည်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။